"Tendrombohitra vavy vavy" Tomato: famaritana ny karazana vary, ny karazana sahona ary ny fambolena fambolena, ny fikarakarana sy ny fambolena voatabiha (sary) - Tavoahangy mena - 2019
Ahoana ny fomba famolavolana sy fambolena tomato "Lady ding"
Ny iray amin'ireo karazana voankazo mahazatra indrindra amin'ny fitomboan'ny dacha sy ny toeram-piompiana dia ny karazana "Lady Fingers". Ireo dia vokatra be loha izay mitombo any amin'ny tany ary manome vokatra tsara na dia eo am-pandriana faran'izay betsaka aza. Ny isan-karazany dia manondro ny fihinana maitso, izay manampy amin'ny lazany. Ny fampahalalana manan-danja amin'ny fanapahan-kevitra hivoatra, inona no safidy, momba ny toetoetry ny fambolena sy ny fikarakarana dia fampahalalana momba ny karazana sy ny endri-javatra.
Soil and inhaler
Mitombo avy amin'ny voa mankany amin'ny zana-ketsa ao an-trano
Ny fiomanana voa
Content sy toerana
Famolavolana voa nambolena
Famolavolana ny zana-ketsa
Ny teknolojia ara-pambolena amin'ny fitomboan'ny voa voatoto eny an-kalamanjana
Ny dingana famolavolana ny voa eo amin'ny tany
Fandefasana ny tany sy fanosihosena
Vovoka, aretina ary fisorohana
Olana sy torohevitra mety
Famerenana avy amin'ny tambajotra
Ny "rantsantanana ankolaka" dia mety hitombo amin'ny tany malalaka sy mihidy - trano fonenana sy trano fonenana. Ny voankazo matsiro amin'ny endrika sikilika dia ampiasain'ireo mpikarakara hikaroka ny ririnina, salady, amin'ny endriky ny sokatra sy ny fizarana faharoa. Afaka tahirizina ao amin'ny toerana mahafinaritra mandritra ny 4 volana.
Ny fahasamihafana dia mihamatanjaka aloha, noho izany dia manomboka amin'ny volana Jona ny voankazo ary maharitra hatramin'ny fararano. Tokony ho 110 andro no mandeha amin'ny fiterahana mba hahamatotra. Ny hazo iray dia afaka mamokatra voankazo 1 kg. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia mety ahazoana milanja 15 kg voatabia isaky ny metatra toradroa. m (6-8 katsaka).
Ny voa dia elastic, dense, sweet-sour to the taste. Mandritra ny fitaterana dia tsy miharatsy. Ny tavy "Lady Fingers" dia manondro ireo karazana safidy. Ny karazana isan-karazany toy izany dia mety hahatratra hatramin'ny 1 m. Raha vantany vao miteraka ao amin'ny tendrony avaratry ny kirihitra, dia mitohy ny fitomboana. Noho izany antony izany, tsy voatery hanongotra sy hamorona kiraro ny zavamaniry. Ny tsy fahampian'ny karazana mamaritra dia azo heverina ho voafetra maromaro borosinify boribory - 4-6, ary voatabia 5-6 ao anaty borosinify tsirairay.
Ny tombontsoa azo amin'ny varotra ho an'ny toeram-piompiana:
ny fanoherana ny aretina tara sy ny aretina hafa;
tsara ny mitahiry ny voankazo.
Fantaro ny fomban'ny fambolena karazan-tsimparifary toy ny Samara, Bokele F1, Kiss of Geranium, Caspar, Aelita Sanka, Gulliver F1, Batyana, Troika, Irina f1 , "Mpandresy", "Snowdrop", "Crimson Giant", "Tolstoy f1", "Blagovest", "Fahagagana avy amin'ny tany", "Redhead Hood", "tsy hita maso."
Ny "rantsantanana ankizivavy" dia manaiky ny hafanana sy ny hain-tany. Ny kalitao amin'ny fijinjana dia miankina amin'ny hamaroan'ny voankazo sy ny fiterahana azon'ireo zavamaniry. Ny fahasamihafana dia manohitra ny aretina. Tsy dia misy fiantraikany amin'ny fahatairana tara loatra izany, satria efa matotra aloha izy vao manomboka mihetsika.
Fantatrao ve? Noheverina ho kilasy "Fitiavana ankizivavy" nohavaozina maherin'ny 100 taona lasa izay ary iray amin'ireo karazam-biby 20 karazany indrindra ao an-tokantrano.
Ny voankazo dia mavo maitso maitso, lava lavalava mitongilana miaraka amin'ny tadiny malefaka, voaangona ao amin'ny borosy. Ny tsiro amin'ny voatabia dia mamy sy maivana. Ny salan-dite ho an'ny voankazo dia 60 g. Ny voankazo avy amin'ny "rantsantanana vavy" dia mety hahatratra 145 g.
Ny vokatra azo isaky ny kirihitra dia voankazo 30 eo ho eo. Ny endrik'ilay voankazo dia malefaka, ny hoditra dia malefaka sy azo hanina, ny nofo dia mamy, aromatika. Ao amin'ny sehatry ny efitrano misy masomboly madinika, dia tsy misy voa betsaka ao anatiny.
Ny tsimokaretina ho an'ny voatabia dia mitombo ao amin'ny efitrano, trano fonenana na trano fivoahana. Ny taonan'ny "Lady Fingers" famolavolana amin'ny fotoana itoerana ny tany dia 50-60 andro. Ny fangatahana tsy maintsy atao amin'ny zana-ketsa dia manondraka, izany hoe, manondrotra ny zavamaniry avy amin'ny boaty ho kaopy ao amin'ny dingana amin'ny tena ravina marina.
Manamafy ny zavamaniry izy ary manolotra karazana fitsaboana amin'ny aretina. Ny zana-pamoloana tsy mbola voatsimbina dia matanjaka kokoa, manana fery kokoa sy fototarazo, ary mety ho aretina azo avy amin'ny pilina. Ankoatra izany, ny zana-ketsa dia mihamaharetana amin'ny fanesorana zavamaniry mandritra ny andro manomboka amin'ny efitra mankany amin'ny rivotra madio.
Ny voajanahary tsara dia manana loko matevina, ravina tsara ary mavesatra amin'ny hafanana be loatra. Mahavariana mora foana ny maraina: ny zana-ketsa marihitra sy masiaka dia miangavy ny maso amin'ny ravina marevaka amin'ny ravina tsara tarehy. Rehefa miditra amin'ny tany ny zavamaniry toy izany dia mampiavaka ny ora vitsy.
Aza mividy zavamaniry mihalalina amin'ny ravina melenkimi mahamay. Raha mitombo ny zana-ketsa amin'ny anao manokana ary efa be loatra ny zavamaniry, dia rehefa mamafy ianao, dia afaka mametraka ny fakany sy ny ampahany amin'ny vatan-kazo amin'ny tranom-pambolena. Amin'ity tranga ity dia ho lasa rafitra fototra ny fotony iray ary hampatanjaka ny kirihitra.
Fantatrao ve? Ny fitomboan'ny voatabia dia nanomboka ny Azteky fahiny tao amin'ny taon-jato YIII tamin'ny taon-dasa. e. ary niantso azy ireo hoe "voatabiha", izay midika izany - "bevy be". Ny teny hoe "tomato" dia avy amin'ny frantsay "pomme d'ore" - pila volamena
Ny fepetra fototra amin'ny tany - ny sakafo. Raha miresaka momba ny tetiarana manokana isika, dia, araka ny fitsipika, dia simba ny alany noho ny fambolena maharitra ny voany ary mila sakafo. Ankoatr'izany, manangona ny tany amin'ny lohataona sy ny lohataona izy ireo, satria ny fakan-tsimparitry ny voatabia dia mila tonta ary tsy mivoatra tsara ao anaty tany.
Ho an'ny sakafo ao amin'ny tranoben'ny fambolena:
nitrogen - 30 g isaky metatra. M;
Phosphorus - 12 g isaky ny kianja. M;
potassium - 45 g isaky ny kianja. M.
Ny fitafy tsara indrindra dia vita amin'ny taom-pivoarana mialoha sy ny voninkazo. Mipetraha tsara amin'ny tany alaola. Saingy ny tany ho an'ny voatabia dia mety manana fihetseham-po ambany. Raha asidra ny tany, dia ilaina ny mampihena ny asidra amin'ny alàlan'ny fametrahana laisoa vita amin'ny loto. Mba hanamarinana ny asidrain'ny tany, dia mila mametraka landy sotro ianao ao anaty fitoeran-drano ary manondraka vinaingitra vinaingitra eo amboniny. Atsipazo ny hafanana, ary raha miseho ny blasfemia, dia mety malemy ny tany na tsy miandany (arakaraka ny isan'ny bubbles).
Manoro hevitra anao izahay hamaky momba ny karazan'aretina misy ny tany, ny fomba hanatsarana ny fahavokarana ny tany, ny fomba hahafantarana tsy miankina ny fiantohana ny tany ao amin'ilay toerana, ary koa ny fomba famoahana ny tany.
Raha tsy misy fanehoan-kevitra, dia maloto ny tany. Ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny tany dia ny fahafatesan'ny micro micro-organismes ao aminy ary ny tahan'ny fivalozana tena tsara, ny loko sy ny mikroflora hafa.
Mba hampihenana ny asidra amin'ny tany dia mety ho laisoa, lafarina dolomita, kalsa, lavenona. Tsara ny manamboatra ireo singa ireo (afaka iray amin'izy ireo ianao) andro vitsy alohan'ny hambolena mivantana any amin'ny hady ho an'ny zana-ketsa.
Lahatsary: ​​ahoana no hamaritana ny asidin'ny tany Ho an'ny laisoa, ny taham-pamokarana dia toy izao manaraka izao:
tany tany - 500 g / sq. M;
Asidra mena - 400 g / sq. M;
siny kely - 300 g / sq. M.
Mila antsasany ny lakana.
Ny alaham-bidy mialoha ny tomato "Lady ding" dia carrot, zucchini, persia, cauliflower, cucumbers. Ny tanjon'ny rotaka dia ny fisorohana ny aretina sy ny fifehezana ny bibikely manimba ny legioma.
Fantaro izay tokony hambolena aorian'izay ary ahoana no fomba handaminana ny voa tsara.
Ny fambolena amin'ny tany dia mipoitra amin'ny voalohandohan'ny volana aorian'ny fampitsaharana ny lohataona amin'ny lohataona. Ny Tomatoes "Fitiavana ankizivavy" dia napetraka eo anelanelan'ny andalana 50 cm eo anelanelan'ireo andalana sy 30 cm eo anelanelan'ny zavamaniry ao amin'io laharana io. Raha mitondra horohorontany ao anaty hady ianao mba hambolena, tokony atao 5 andro mialoha ny fambolena, mba tsy handoro azy ireo. Ny fandroana ny zavamaniry rehefa manangona dia tokony hampidirana rano 1 ho an'ny zavamaniry 8. Ny fikarakarana fikarakarana bebe kokoa dia ny famatsian-drano, ny famafana ny tany ary ny fimamoana.
Rano indray mandeha isan-kerinandro amin'ny 45 l / sq. m. Ny fanondrahana hatrany am-piandohana ny voninkazo mandra-pahatapitry ny vanim-potoana mitombo. Mba hiarovana ny fahamendrehana dia alefa ny tany any amin'ny faritry ny ala 1-2 andro aorian'ny fidiovana.
Ny tomates dia tena be fitiavana, noho izany izy ireo dia nambolena tao amin'ny faritra mafana. Tokony ho raisina an-tsaina fa ao anatin'ny andro mafana, ny faritra eo ambanin'ny masoandro misokatra dia rano iray isaky ny 3 andro.
Ny fepetra tsara indrindra ho an'ny fitomboan'ny "rantsantanana ankizivavy":
Temperatura air - + 23 ... +27 degrees;
Fiantohana - 60%;
fanazavana - toerana mahafinaritra mangatsiatsiaka;
drano - 1 ora amin'ny 5 andro amin'ny tahan'ny 5 litatra isaky ny zavamaniry;
mamono - indray andro aorian'ny fandroana;
Fitafy ambony - ao amin'ny dingam-pivoarana sy amin'ny fotoam-bary.
Aza mividy ambioka any amin'ny toerana tsy misy mpividy. Voalohany indrindra, tsy azonao antoka ny hatsaran'ny voa. Ny fivarotana ny entana ho an'ny zaridaina dia manome karazan-tsimpary samihafa samihafa miaraka amin'ny tahiry lehibe sy kely.
Hahasoa anao ny mamaky momba ny fomba hisafidianana ny fotoana tsara indrindra hanamboarana zana-katsaka, ary koa ny fomba hitsimbanina sy ny fomba hanamboarana voa voatoto.
Raha maniry voatabia isan-taona ianao, dia tsara kokoa ny manome ny voa avy amin'ny vokatra efa misy. Ho an'ny kilasin'ny "Fitiavana ankizivavy" dia azo ekena sy azo ekena izany, satria izy io dia kilasy, fa tsy hybrid, ary ny fitaovana masira dia tsy ho very amin'ny hatsarany.
Ho an'ny fijinjana voa, dia misafidy voankazo tsy misy mari-pamantarana izay tianao ary mametaka ny sira miaraka amin'ireo voa any anaty fitoeram-ponenana iray. Rehefa manomboka manitra ny ranom-boasary, dia manasà voa, dia atsofoka ary ataovy ao anaty kitapo fitehirizana alohan'ny famafazana.
Fantatrao ve? Anisan'ny fandaharam-pianarana, dia nitsidika ny International Space Station tamin'ny 2000 ny masom-bary, ary nipoitra tao amin'ny sekoly rehetra ao Kanada ho toy ny tetikasa Tomatosphere.
Ho an'ny fahasimbana, ny voany dia azo apetraka ao anaty rano miaraka amin'ny hafanana +50 degrees mandritra ny 20 minitra. Avy eo dia mamelatra masomboly matevina ao anaty sosona matevina eo amin'ny habakabaka mba hiterahana sy hanafana amin'ny lamba matevina na fandefasana lamba.
Ny rivotra mena dia mahafa-po tsara, ary ny fibra dia mitazona ny hamandoana ilaina amin'ny voa ary tsy mamela azy ho maina. Ny vokatra tsara dia manome ny fangirifiriana amin'ny voa amin'ny 1% ny vahaolana amin'ny potassium manganese mandritra ny 24 ora. Ny faharetan'ny fanangonana - 2 andro. Mamafazo ny voa ao anaty tany maivana. Raha maina ny tany, dia tokony ho rano izy.
Lahatsary: ​​fanomanana voan-tsimparom-bary mba hambolena
Raha mitombo ny zana-ketsa dia ambolena ao anaty boaty manokana ho an'ny zana-ketsa. Ny zavamaniry sasany dia maty aorian'ny famindrana, noho izany dia mila zana-ketsa 30% mihoatra noho ny ilaina izany. Vovonan'ny tany mba ahafahanao mividy vita ao amin'ny fivarotana, ary afaka mahandro avy amin'ny tavy, sawdust ary mullein.
Zava-dehibe izany! Tsy azo atao ny mampiasa ny tany amin'ny toerana ho an'ny zana-ketsa, satria misy orin'aretina marary isan-karazany, izay mety hisy fiantraikany amin'ny fivelaran'ny zavamaniry.
Raha nambolena tao anaty boaty ho an'ny zana-ketsa ny voa, dia nentina nentina tany anaty tany izy ireo ary nandavaka matetika. Ny voa dia hitsiry amin'ny andro 7-10 andro aorian'ny fambolena. Ny tsimok'aretina dia voatsindry avo roa heny amin'ny vahaolana amin'ny supphosphate, chloride potassium ary ny nitrate ammonium amin'ny dite 30 g / 20 g / 20 g isaky ny 10 litatra. Ny fikarakarana dia tanterahina amin'ny 50 hatramin'ny 60 andro ny fitomboan'ny voa voatango.
Ny andro mazava ho an'ny zana-ketsa dia tokony haharitra 10-12 ora. Ny jiro dia tsy tokony ho toy ny iray, satria amin'ity tranga ity, ireo zavamaniry dia hanitatra mankany amin'ny loharano. Noho izany, ilaina ny manasongadina azy ireo amin'ny jiro mitaratra, izay manome fanazavana mitovy.
Tokony ho farafahakeliny +26 ° С ny mari-panaovana rivotra. Ny mari-pana amin'ny alina dia tsy tokony hianjera eo ambanin'ny 17 ° C. Ny rano dia azo avy amin'ny fandroana afaka 1 fotoana ao anatin'ny 5 andro. Ao amin'ny dingan'ny ravina voaloha dia manidina ao anaty kaopy ary manatanteraka ny sakafo voalohany.
Azo inoana fa liana ianao hamaky momba ny fomba sy ny fotoana hitsarana voatabia araka ny tokony ho izy aorian'ny fiterahana.
Alohan'ny hanangom-bokatra amin'ny tany, manomboka amin'ny 30 andro, dia mikarakara rivotra madio ny zavamaniry. Ny famoahana voatabia eny an-dalambe dia tokony ho andro, aloha amin'ny fiaraha-misakafo, ary mandritra ny andro iray manontolo amin'ny hazavana. Ny tanjon'ity fanenjehana ity dia ny fampifanarahana ny voatabia amin'ny toe-pahasalamana voajanahary, ny fanamafisana ny zavamaniry ary ny fampitomboana ny fanoherany amin'ny aretina isan-karazany.
Ao amin'ny tany, "Lady Fingers" tany amin'ny voalohandohan'ny volana May, amin'ny 50-60 andro ny fitomboana. Ny fanangonam-bokatra dia tanterahana amin'ny ora fohy maraina mba ahafahan'ny zavamaniry manatsara kokoa. Ny fangalarana ny zavamaniry dia nesorina tamin'ny kaopy sy ny tany. Ny fitaterana dia tanterahana ao anaty lavaka kely mitovy amin'ny ao anaty kaopy.
Ny singa niavaka dia zavamaniry - voaangona kely amin'ny firoboroboana izy ireo ka ny ampahany tafahoatra dia napetraka miaraka amin'ny rafitra fototra. Ny toerana iray misy elanelana eo amin'ny 50 santimetatra ary ny elanelan'ny zavamaniry tsirairay ao anatin'ny 30-40 cm dia heverina ho tsara indrindra. Amin'ny ankapobeny, 1 metatra toradroa. Tokony tokony ho 6-8 ny zavamaniry.
Lahatsary: ​​fambolena tomomboly eny an-tany
Fantatrao ve? Tsy maninona raha miresaka amin'ny zana-ketsa ianao, fa tena manoro hevitra azy ny hanao azy. Ny fiantraikany eo an-tampon'ny zavamaniry amin'ny tanana na zavatra iray hafa dia miteraka ny famokarana etyolène hormone manokana, izay manatsara ny fivoaran'ny zavamaniry.
Rehefa mamboly voa eny an-tany malalaka dia mitandrema ireto fitsipika manaraka ireto:
Ny fikarakarana ny tany sy ny fambolena voa dia mitovy amin'ny an'ny zana-ketsa;
atsangano ny tany;
fanangonana ho an'ny fambolena;
2 herinandro mialoha ny hambolena, raha ilaina, dia hampihena ny asidrain'ny tany amin'ny alàlan'ny fanaovana kalsa na lime;
mampangotraka 4-5 andro mialoha ny famolavolana;
Ao amin'ny faritra atsimo, voan'ny tsimok'aretina dia natsipy tamin'ny tany ary rakotra amboara miaraka amin'ny sarimihetsika mba hahazoana ny fepetra tsara indrindra ho an'ny fanangom-bokatra voajanahary;
Rehefa avy nipoitra ilay sary dia nesorina ilay sarimihetsika.
Any amin'ny faritra hafa dia tsara kokoa ny manamboatra voatabia amin'ny tany amin'ny fomba amam-borona.
Ny toetrandro lohataona dia miavaka amin'ny fiovana tampoka amin'ny andro sy ny alina, ny hafanana amin'ny tany amin'ny ora maraina, ary ny rivotra mangatsiaka. Ny trano fonenana sy ny trano fonenana dia ampiasaina mba hiarovana ireo zavamaniry amin'ireo trangan-javatra ratsy ireo ary mba hahazoana tombom-barotra aloha.
Ny trano fandroana dia rakotra fimailo kely ho an'ny zavamaniry eo amin'ny 50 sm eo amin'ny haavony. Ny asan'ny trano fonenana dia ny fiarovana ny zavamaniry amin'ny hafanana tafahoatra sy ny hatsiaka. Raha mikasa ny hitombo ny voatabia avy amin'ny voa eny an-tany malalaka, dia tsara ny miaro ny zana-ketsa manana alimo.
Ho an'ity trano famolavolana ity aorian'ny famafazana voa eo amin'ny tany. Ny trano fandroana dia rafitra misy toeram-ponenana ho an'ny fambolena. Ny trano fonenana dia manjary tsara kokoa ny mari-pana. Ny famokarana maoderina amin'ny alàlan'ny trano fonenana dia mamela ny zavamaniry handray tsara ny hazavana. Raha mitoetra ny trano fonenana, dia efa vonona ny tany ao anatiny, ary alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoana manaraka, dia hikolokolo tsotra izao sy hampiroborobo azy. Ny voa dia napetraka amin'ny fomba fanoratana, mba hanesorana ireo zavamaniry na zana-ketsa somary matevina.
Ao anaty trano fambolena, voa namboly tamin'ny volana aprily, aorian'ny faran'ny lohataona. Ao amin'ny famokarana herinaratra dia vita amin'ny volana Martsa. Izany dia vokatry ny fahasamihafana eo amin'ny fitondram-panjakana: tsy mihamafana ny trano fonenana ary tsy afaka ny mitazona hafanana amin'ny 17 ° C amin'ny alina. Ary ho an'ny trano fonenana, dia tsy olana ny mitazona ny faharetan'ny mari-pana.
Zava-dehibe izany! Mba hisorohana ny areti-mifindra, ento ny voa amin'ny 1% ny vovo-pototra mangatsiaka mangatsiaka mandritra ny 12 ora.
Lahatsary: ​​Mamafy voatabia voatabiha amin'ny tany malalaka
Ao amin'ny tany malalaka amin'ny lohataona be dia be. Noho izany, voatoto 1 isam-bolana ny voatabia. Matetika ny tondra-drano no atao amin'ny hosoka. Ny tahan'ny rano - 40-50 litatra rano isaky ny efamira. tany, izany hoe, 6-8 zavamaniry.
Alohan'ny handroahana ny rano ao amin'ny hadilanana, dia milomano ny tany amin'ny rano kely. - Izany dia hanatsara ny fananganana. Amin'ny fotoanan'ny orana dia tsy ilaina ny rano. Tsy tokony ho eo ambanin'ny 14 ° C ny hafanan'ny rano mandritra ny fanondrahana. Noho izany dia tsara kokoa noho ny hatsiaka ny rano mafana ary tsapa kokoa noho ny hatsiaka.
Manoro hevitra izahay hamakafaka raha toa ka azo atao ny maniry voatabia tsy misy rano, ary koa ahoana ny fomba tsara sy ny fampiasana matetika ny voatabia eo amin'ny sehatra misokatra sy ny trano fonenana.
Indray andro aorian'ny fanondrahana, dia alefa eo anelanelan'ny zavamaniry ny tany. Tanjona famongorana - Manome fakan-tsakafo miaraka amin'ny fidirana amin'ny làlana. Ny halalin'ny fanitsiana - 4-8 cm. Manimba ny rivotra midadasika amin'ny tany ny fototarazo ary mety hitarika aretina amin'ny fototarazo, ny fahasimban'ny fivoarany ary ny fitomboan'ny zavamaniry.
Ny famotehana ny tany koa dia manampy amin'ny ady amin'ny bibikely sy ny tsimparifary. Ny fanodinkodinana dia tanterahana amin'ny fanampiana ny zaridaina na rantsana manokana: gorodona ho an'ny zaridaina, elektrika na mpanamboatra herinaratra. Ny fanosihosena dia aseho rehefa mipoitra ny tsimparifary ary mamaha - rehefa avy orana na rano.
pasynkovanie - Ity fanesorana ny jono tanora, izay miforona ao amin'ny famaky ny ravina. Manatsara ny fitomboan'ny voankazo ny fananganana tsimok'aretina toy izany ary manatsara ny fiterahany. Rehefa miala ny fotony sy ny tongony miaraka amin'ny tasselan'ny voankazo. Ny teknika dia ny famongorana tanteraka ny dian-tongotra amin'ny rantsantanana.
Manoro hevitra ny fomba tokony hananana voatabia voatabia ao amin'ny trano fivoahana trano sy eny an-tsaha isika.
Lahatsary: ​​tomato pasynkovka Ho an'ny rantsantanana ankizivavy, ny pasynkovaya dia tsy mety. Mihamitombo ny fitomboan'ny voankazo amin'ny voankazo, ary tsy mandany ny fitomboan'ny ravina hafa. Taorian'ny pasynkovka voatabia dia tokony hitovy amin'ny bozaka madio miaraka amin'ny voatabia voatabia 5-6.
Ny asan'ny fandefasana voatabia - manazava ny lanjana tokony horaisin'ny barika. Ny "rantsantanana ankavanana" dia sokajy ambany ambany misy haavo hatramin'ny 1 metatra, ka tsy mila fitaovana izy ireo.
Fantaro ny fomba sy ny antony hamehezana ireo voatabiha eny an-tsaha sy ny trano fonenana polycarbonate.
Ny fototry ny famatorana - Famahanana ny zavamaniry amin'ny rafitra fanohanana. Ny famolavolana dia mety ho trondro horita na vertika, fefy na fefy kely, hazo na metaly. Ny tsorakazo voatabiha dia mifamatotra amin'ny poketra. Ny garazy dia tanterahana rehefa mihalehibe ny zavamaniry. Ny karazana trelise dia misy tady na tady misy elatra misy eo amin'ireo singa manohana, izay ampiarahan'ny zavamaniry. Ao amin'ny fotony toy izany dia mety ny mifamatotra amin'ny kofehy, fa ny borosy ihany koa. Trellis vertika - Izy io dia akanjo voatabia ao amin'ny valanjavaboary.
Rehefa mitombo ny voatabiha, dia mihamahavina ny tendrombohitra. Ny fametrahana ny rafitra manodina ny orinasa dia fomba fiasan-kolaka kokoa sy tsy mahomby, satria ny fametrahana ny rafitra manodidina ny roan-jato zato - fotoana lavalava izany, ary ilaina ny fananana fitaovana lehibe ho an'ny rafitra, noho izany dia ao amin'ny trano fandroana, ny famatorana ny trellis dia ampiasaina, ary amin'ny toeram-pambolena tsy miankina - amin'ny trellis na tsimoka.
Fantatrao ve? Raha tsy mifatotra ny voatabia, dia tapaka eo amin'ny lanjan'ny voankazo ireo sampana, ary ho lasa akaiky kokoa ny voankazo to be located ho an'ny faritra voan'ny aretin'ny fungi sy ny tara-pahavoazana.
Lahatsary: ​​Tomato Garter
Ny sakafo voalohany dia tanterahana 20 andro taorian'ny nandehanana tany an-tanety. Avy eo, iray volana taty aoriana, nandritra ny fitomboan'ny voninkazo sy ny fambolena. Ny fomba tsara indrindra - Manao akanjo ambony matevina izy io.
Ny fitotoana dia tokony ahitana manodidina ny 5 g ny zezika azota, 10 g potasy ary 10 g ny phosphate. Mangatsiaka be eo anelanelan'ny tsipika ny tsiranoka. Mamolavola azy eny amin'ny tany maina.
tavoahangy ny voatabia;
Andro iray taty aoriana, rehefa maina ny zavamaniry rehefa mivoaka ny rano, - mampitombo betsaka;
ny ampitso - mamaha ny tany;
Ataovy toy ny mahazatra ny fandroana manaraka - amin'ny 5-7 andro.
Ny mari-pahaizana "Lady ding" dia miorina amin'ny aretina na ao amin'ny trano fonenana, ary amin'ny toerana misokatra. Ny aretina mahazatra indrindra amin'io karazany io - Mosaic. Ao anatin'io aretina io, ravina marary dia rovitra sy may.
Ny mpivarotra vavimatoa amin'ny aretina tazo dia fungi sy bakteria. Ny endriky ny aretina maro dia ny hoe ireo taolam-paty ireo dia mety ho eo amin'ny tontolo iainana ao anatin'ny fanjakana tsy mavitrika ary manomboka mihamaro kokoa aorian'ny fisian'ny toe-javatra mety.
Fantaro ny fomba fanaraha-maso ny aretina sy ny bibikely voatoto.
Anisan'ireo aretina amin'ity kilasy ity ireto manaraka ireto:
Mosaic - Aretina virosy izy io ary zara raha misy. Ny soritr'aretiny - ny endrik'ireo tara-pahazavana amin'ny voatabia sy ny mavo na mavo na mavo eo amin'ny ravina. Tena simba ny ravinkazo ka maty. Matetika dia mihinana voatabia voatabia. Tsy misy ny fomba mahomby hiadiana amin'ny aretina. Ny singa manokana amin'ny viriosy dia ireo tomato mamaritra, anisan'izany ny "Lady Fingers", no manohitra ny ratra;
tara be - Ity dia faharesen'ny zavamaniry aorian'ny oram-panala avy amin'ny pilina phytophthora. Naseho tamin'ny endriky ny faritra mavokely eo amin'ny ravina sy ny voankazo. Ho an'ny famindrana dia ampiasao ny fanafody "Fitosporin", ary hampiato ny aretina "Famoxadone" sy "Mefenoxam".
Fantatrao ve? Ny tsimparifary dia manakana ny fivoaran'ny tsimokaretina amin'ny tazo. Ao amin'ny zavamaniry izay anisan'ny tsimparifary izay toa tsy dia hita loatra.
tongotra mainty, fotsy fotsy, dia hita any amin'ny faran'ny zavamaniry. Matetika no hita amin'ny zana-ketsa. Mba hisorohana ny aretina dia tokony hosotroina ny fitotoan'ny tany, ny voan'ny voankazo ary ny fitomboan'ny taova - "Psevdobakterinom-2";
toerana Izy io ihany koa ny aretin'ny bibikely ary miseho amin'ny volo mavo mavo. Voafehy amin'ny famoahana fungicides, ohatra, ny zava-mahadomelina "Bravo".
Ny karazana fungus rehetra dia manomboka mivoatra amin'ny fahamatorana avo. - aorian'ny orana na amin'ny rano be loatra. Amin'ny maha-dingana fisorohana azy, ny famafazana zava-mahadomelina be dia be, anisan'izany ny fizotran'ny vokatra.
Ny bibikely bibikely, ny Maybeetle no mahazatra indrindra. Manana ny fakan'ny zavamaniry izy io, ary dia maina izany. Ny lava dia nesorina rehefa nihady. Ny gardens koa dia mampiasa ny zava-mahadomelina avy amin'ny orsa sy ny bibikely hafa. Ny zava-mahadomelina toy izany dia mifangaro amin'ny voankazo masira, ohatra, buckwheat ary napetraka teo amin'ny tany. Aoka ho voangory Raha maty ny bibikely matavy dia maty. Ny karazam-bozaka isan-karazany dia misy karazam-borona isan-karazany. Mba hamotehana azy, ampiasao ny zava-mahadomelina "Proteus". Ny fitotoana dia atao amin'ny toetrandro tsy misy rivotra. Afofa amin'ny ravina voatoto Raha ilaina, averina amin'ny 3-5 andro ny fiparitahana, raha toa ka voatahiry ny aphid na miseho iray vaovao. Ankoatra ny kalsioma, voatatra amin'ny voatabia, lapoaly, kibay ny voatabia. Ny fikarakarana ny zavamaniry avy amin'ny bibikely dia natao amin'ny endriky ny fantsona ny zava-mahadomelina avy amin'ny karazana bibikely iray.
Ny tomaty dia tsy maintsy voaoty rehefa mamony. Ho an'ny "Lady Fingers" - it's june - Jolay. Ny voamadinika dia miala amin'ny sampana mba tsy hanimba ny akorany. Raha voatahiry ireo voatabia, tsara kokoa ny manala ny tselatra, mba tsy hanimba ireo voatabia hafa mandritra ny fitahirizana.
Ny voankazo tsy salama dia napetraka ao anaty boaty. Ny birao fanangonana dia napetraka ao amin'ny faritra mafana voadio, izay tsy misy bobongolo. Ny isa maromaro ao anaty boaty dia tokony mihoatra ny telo, mba tsy hanimba ny laharana ambany voatabiha. Ny voankazo voankazo dia azo tanterahina mandritra ny fotoana lava amin'ny hafanan'ny + 3 ... +5 degrees na ireo izay nesorina tao anaty lavaka fanariana. Mofo voaaro mandritra ny herinandro eo ho eo, ny voatabia maitso dia afaka mandry ao anaty boaty mandritra ny iray volana.
Ny tara-ketsa voatabiha amin'ny boaty dia azo alefa amin'ny taratasy na ny fitaovana fanodinana. Tokony hosasana ny voankazo alohan'ny hisakafo.
Fantatrao ve? Ny tomaty dia ampiasaina amin'ny famokarana kalsioma. Ao an-dakozia dia fofona voatabia voatabia sy ravina no ampiasaina.
Mba hanangonana ny vokatra tsara dia ilaina ny mitandrina ny fitondrana ny fisotroana, ny famatsiana, ary ny fandefasana, raha mitombo ao anaty trano fonenana ny zavamaniry.
Ny fianjeran'ny raviny, ny owara na ny voankazo dia vokatry ny tsy fahampiana na ny tsy fahampian'ny zavatra sasany:
lamba - Ny singa fototra amin'ny photosynthesis. Raha tsy ampy ny fanazavana, dia manomboka mandroa ny taova tsy ilaina, izany hoe ravina tafahoatra, ilay zavamaniry. Noho izany, aza manamboatra voatabia eo ambanin'ny hazo na any amin'ny faritra hafa maina. "Fitiavana ankizivavy" - Ny karazana dia mahatsapa manokana ny tsy fisian'ny hazavana;
Ny fianjeran'ny ivoara dia manondro ny tsy fahampian'ny singa mpandindona ao amin'ny tany. Mba hisorohana ny tranga toy izany amin'ny toeram-pambolena dia zava-dehibe ny mamahana ara-potoana mialoha ny voninkazo;
Raha mahita voankazo lavo ianao, dia mety ho voan'ny aretin-koditra iray ny zavamaniry. Ny rot dia manomboka amin'ny toe-piainana tafahoatra. Ahitsio ny kirihitra amin'ny vahaolana amin'ny sulfata varahina, urea ary zinc.
Fantatrao ve? Ny mari-pamantarana ny fiantohana avo dia avo ny tany. Mandritra izany fotoana izany, ny ahitra dia mitombo amin'ny tany kely, ary hazo - amin'ny sour.
"Fitiavana am-paty" - karazany feno tsy misy dikany, izay vokatra tsara tsy misy fanafana. Kanefa, ny kalitao amin'ny fijinjanao, mazava ho azy, dia mihamitombo amin'ny fikarakarana ny zavamaniry. Mamboly "rantsan-tànana vavy" amin'ny tany malalaka sy mihidy ary mahazo tombony tsara.
Tamin'ny taon-dasa, naman'ny voankazo iray ny voan'ny Tomato Aelita "Lady Fingers". Novidiny tao amin'ny magazay 2 packs izy. Nisy nanome ahy. Tiako avy hatrany ity karazany ity noho ny tsirony. Ny rantsantanana vavy dia mihinana aloha loatra. Mampitombo ireo voatabia amin'ny alalan'ny zana-ketsa. Mamafy masomboly aho amin'ny volana Martsa amin'ny boaty miaraka amin'ny tany ary maniry izany eo am-baravarankely. Tamin'ny volana Mey, namboly tao anaty tany ny zavamaniry. Ho an'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fambolena lamba. Tiako ity karazana vary ity. Tsiro ambany ny tomato. Tsy maniry mihoatra ny 60 cm izy ireo. Ampahany amin'ireo zavamaniry napetrako ao anaty trano fonenana. Any izy ireo dia mihamora haingana ary mamokatra vokatra vao haingana. Ny rantsan-tànana ankizivavy dia tsy tratrako. Mivelom-boly ary mametaka am-pitiavana ny voankazo izy ireo. Tao anaty fitaratra iray no namolavola tsiro 5-6. Ny voankazo amin'io karazana io dia ny endriny miloko. Eo amin'ny lafiny roa dia misy sisiny kely. Ao ambadiky ny voatabia dia misy seza faharoa. Manangona masomboly avy amin'ny voankazo lehibe aho ary mampiasa azy ireo amin'ny fambolena zana-ketsa amin'ny herintaona. Ny voankazo masaka amin'ny voatabia dia miloko mena. Ny lanjan'ny vokatra eo ho eo dia tokony ho 70 grama. Tato ho ato dia mihazona ny fanolorana azy ireo ravin-dandy vavy. Noho izany, afaka mandefa azy ireo any amin'ny tanàna hafa amin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka aho. Io karazany io dia manana hoditra matevina, ary mety ho voatahiry mandritra ny fotoana maharitra. Mihinana voankazo hafakely aho. Mamy, mamy ary mamy izy ireo. Reraka izy ireo amin'ny ririnina. Manana rafitra matevina izy ireo, ka aza kivy rehefa voatahiry. Manamboatra voatabia an'io karazana salady io aho mandritra ny ririnina.
Tao amin'ny fivarotana dia nifidy voatabia aho, nianjera tao amin'ny Aelita's Ladies 'Picks ny safidy. Mipetraka any amin'ny faritr'i Volga izahay, tsy misy trano fambolena, namboly tany malalaka. Nangonona ny voankazo tamin'ny faran'ny volana Jolay-voalohan'ny volana Aogositra. Betsaka ny voatokana ho an'izany. Ary ny ankizy dia tia izany. Sweet, tsy lehibe. Tsy hampidina fiaramanidina goavam-be ao anaty menaka aho. Tsara ny manangona azy ireo amin'ny tany malalaka. Ao amin'ny trano fonenana ihany. Satria izy ireo no voalohany nahazo ny Fitoftorois. Ary raha misy trano fambolena, dia manorata am-pahasahiana. Ny fitomboana dia nosoratana hatramin'ny 60 santimetatra, saingy kely dia tsy mihalehibe izy ireo, hatramin'ny 1m indraindray ary ambony. Ary raha manapa-kevitra ny hamboly amin'ny tany malalaka ianao. Mialà fialan-tsasatra ary arotsaho ao amin'ny Fitovtoroz ary hanana tsara sy tomomby tsara.
Good grade. Voatendry ao amin'ny FG. Tamin'ny voalohany, dia naneho ny tenany ho tsy nieritreritra izy, ary avy eo dia nanomboka nanapaka ny hery sy ny fototra. Maro ny voankazo, tsara indrindra amin'ny sokatra. Toa an'i Caspar, fa misaty kokoa.
Nahazo fahafinaretana amin'ny "Rantsana ankizivavy" tena izy. Hita taratra amin'ny lafiny rehetra: tsiro, hatsaran-tarehy ary tsara tarehy
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ahoana ny fomba famolavolana sy fambolena tomato "Lady ding"